Top 13 Biilasha Caafimaadka iyo Koodh Bixinta Koorsooyinka Khadka Tooska ah
Biilka iyo koodh-bixinta caafimaadku waxay u baahan yihiin xirfadlayaal daryeel caafimaad oo xirfad ku leh IT-ga oo leh heer sare oo isha-faahfaahin ah. Tani waa sababta oo ah waxay dib u eegaan xogta bukaanka dhammaystirka iyo saxsanaanta, fure u ah macluumaadka keydka macluumaadka, iyo habsami u bixinta lacagaha.
Xirfadlayaashani waxay ku heli karaan waxbarashada iyo tababarka looga baahan yahay inay ku fiicnaadaan goobta khadka tooska ah laakiin kuma imaaneyso qiimo jaban. Sidaa awgeed, qodobkani wuxuu ku siin doonaa faahfaahinta qarashka ugu sarreeya ee biilinta caafimaadka iyo koodhadhka koodhinta ee koodhka ah. Waxaad sidoo kale baran doontaa wax ku saabsan biilasha caafimaadka ee internetka iyo iskuulada koodh bixinta ee bixiya deeqo waxbarasho, biil caafimaad oo la awoodi karo iyo iskuulada internetka ee koodh lagu qoro, iyo koorsooyin biil iyo cod bixin caafimaad oo bilaash ah.
Hubi shaxda waxyaabaha hoose si aad u aragto waxyaabaha ugu muhiimsan ee maqaalkan.
1 Waa maxay biilasha iyo koodh-bixinta caafimaad?
2 Waa maxay kharashka biilasha caafimaad iyo shahaadada sireed?
3 Sideen ku heli karaa biil caafimaad iyo warqad codsi?
3.1 Shahaadada ama Barnaamijka Dibloomada
3.2 Barnaamijka Shahaadada la xiriirta
3.3 BA Barnaamijka
3.4 Koorsooyinka tababarka
4 Iskuulada Bixinta Caafimaadka ee Aqoonsiga iyo Koodhadhka Codbixinta ee khadka tooska ah ee Caawinta Dhaqaalaha
4.1 Kuleejka Cambridge ee Daryeelka Caafimaadka iyo Teknolojiyada
4.2 Jaamacadda DeVry
4.3 Jaamacadda Herzing
5 Koodhadhka Caafimaadka ee Qiime jaban iyo Barnaamijyada Lacag Bixinta ee khadka tooska ah
5.1 Kuliyadda Farsamada ee Oconee Fall Line
5.2 College Texas College
5.3 Ogeechee Kuliyada Farsamada
6 Koorsooyin Lacageed Caafimaad Oo Bilaash Ah Iyo Koorsooyinka Koodh Bixinta
6.1 Waa maxay Koodh Caafimaad iyo Biilasha?
6.2 Amniga internetka ee daryeelka caafimaadka
6.3 Baro Biilka Caafimaadka Hal Saac
7 Kharashka Caafimaadka ee ugu sareeya iyo Koodhadhka Koorsooyinka Khadka Tooska ah
7.1 College Texas College
7.2 Kuleejka Farsamada ee Northwest
7.3 Kuliyada Bulshada iyo Farsamada ee Gobolka Minnesota
7.4 Kulliyadda Bulshada ee Degmada Laramie
7.5 Jaamacadda Keizer-Ft Lauderdale
7.6 Kuliyada Farsamada Bulshada Guilford
7.7 Khatarta Bulshada Iyo Kuliyada Farsamada
7.8 Northland Community College iyo College Technical
7.9 Aagga Kulliyadda Bulshada ee Metropolitan
7.10 Southwest Wisconsin Farsamo
7.11 Rochester Community iyo Farsamada Kuliyada
7.12 Kuliyada Bulshada ee Highland
8 Kuliyada Bulshada ee Hills Hills
9 Talo soo jeedin
Waa maxay biilasha iyo koodh-bixinta caafimaad?
Bixinta iyo koodh-bixinta caafimaadku waxay ku lug leeyihiin garashada cilad-baadhista, tijaabooyinka caafimaadka, daaweynta, iyo habraacyada ku jira dukumintiyada bukaan-eegtada ka dibna dib-u-soo-celinta xogta bukaan-socodka ah ee xeerarka caadiga ah si loogu dallaciyo dawladda iyo bixiyeyaasha ganacsiga ee lacag-celinta dhakhtarka
Si fudud marka loo eego, biilasha caafimaadka iyo koodh gareynta ayaa ah habka macluumaadka loogu diro shirkadaha caymiska iyo ka baaraandegista lacagaha bukaanka.
Markasta oo bukaanku helo adeegyo caafimaad, koodhka caafimaadku wuxuu qaataa faylka bukaanka wuxuuna u turjumayaa adeegyada koodhadh guud ee shirkadaha caymiska. Mar haddii shirkadda caymisku hesho lambarradan, biilleyda caafimaadku waxay kula xiriiraan qaddarka lagu leeyahay bukaanka iyo shirkadda caymiska biil ahaan. Mararka qaar, biilasha waxay ku yimaadaan qaab waraaqo ama emayl ahaan ah.
Waa maxay kharashka biilasha caafimaad iyo shahaadada sireed?
Qiimaha helitaanka shahaadada biil caafimaad ee khadka tooska ah waa $ 749. Haddii aad rabto inaad wax ku barato iskuulka ganacsiga maxalliga ah si aad u hesho shahaado, waxay ku kacaysaa inta udhaxeysa $ 1,000 iyo $ 2,500. Dhanka kale, ku raadinta biil caafimaad wadaag ah iyo barnaamijka koodhinta ee kulleejo la aqoonsan yahay ayaa ku kici doonta $ 8,000 in $ 19,000.
Sideen ku heli karaa biil caafimaad iyo warqad codsi?
Helitaanka biil caafimaad iyo shahaado siinta ayaa albaabka u fureysa fursado dhowr ah sida mushahar sare ama rajooyin shaqo oo aad uga roon dadka oo aan shahaado haysan.
Si loo helo shahaado xirfaddan, tallaabada ugu horreysa waa in la raaco biil caafimaad iyo barnaamijka koodh-bixinta ee hay'ad la aqoonsan yahay. Si kastaba ha noqotee, dadka qaarkood waxay dooran karaan wadada dhaqameed ee helitaanka shahaadada khadka tooska ah.
Hoos waxaa ku yaal wadiiqooyinka lagu helo biil caafimaad iyo caddeyn sireed:
Shahaadada ama Barnaamijka Dibloomada
Dariiqa ugu horeeya ee lagu kasban karo biil caafimaad iyo shahaado sireed waxaa loo maraa shahaado ama barnaamij dibloomaasiyadeed. Labada barnaamijba way ku kala duwan yihiin. Barnaamijyada shahaadada waxaa lagu dhammaystiri karaa waqti gaaban waxayna leeyihiin manhaj aad u xaddidan halka barnaamijyada dibloomaasiyadda ay leeyihiin manhaj aad u ballaadhan.
Ardayda doonaya inay si dhakhso leh u galaan xoogsatada waxay dooran karaan barnaamijka shahaadada.
Qiimaha barnaamijyadani waxay u dhexeeyaan $ 800 illaa $ 4,500.
Barnaamijka Shahaadada la xiriirta
Raadinta barnaamijka shahaadada jaamicadeed ee maamulka daryeelka caafimaadka ayaa kuu dejin doonta biilasha caafimaadka iyo caddeynta koodhka. In kasta oo ay ka qaalisan tahay shahaadada ama barnaamijka dibloomada, barnaamijka shahaadada jaamacadeed waxaa aad uga doorbida loo shaqeeyayaasha.
Intaa waxaa sii dheer, shahaadooyinka xirfadeed oo ay ku jiraan imtixaanka Farsamada Macluumaadka Caafimaadka ee Diiwaangashan iyo shahaadada shahaadada xirfadlaha ee shahaadada leh ayaa u baahan musharrixiinta inay haystaan ​​ugu yaraan shahaadada jaamacadeed.
Haddii aad haysato shahaadada jaamacadeed ee maamulka daryeelka caafimaadka, waad dalban kartaa dhibcaha inaad ku sii socoto shahaadada bachelor-ka.
Kharashka shahaadada jaamacadeed wuxuu u dhexeeyaa $ 6,000 ilaa $ 13,000 waxayna qaadataa laba (2) sano in la dhammaystiro.
Adiga oo kasbanaya shahaadada koowaad ee maareynta macluumaadka caafimaadka ama maamulka daryeelka caafimaadka, waxay ku siin doontaa gees inta aad ku guda jirto xirfad ku saabsan biilasha caafimaadka iyo koodh gareynta. Tani waxay ku siin doontaa waxbarasho dhammaystiran iyo tababar looga baahan yahay inaad ku fiicnaato berrinka.
Waxay qaadataa qiyaastii afar sano in la dhammaystiro barnaamijka kharashka barnaamijkuna wuxuu u dhexeeyaa $ 36,000 ilaa $ 120,000.
Jidh sida AAPC waxay siisaa koorsooyin tababar ardayda raba inay u fariistaan ​​imtixaannada biilasha caafimaadka iyo codeynta koodh bixinta. Koorsooyinkan waxaa badanaa lagu qaataa internetka. Waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay noqdaan codeeyeyaal xirfadlayaal ah oo la aqoonsan yahay (CPC), nambarro bukaan-socod oo la aqoonsan yahay (COC), ama nambarro bukaan-socod leh oo la aqoonsan yahay (CIC).
Haddii kale, ardaydu waxay ka heli karaan koorsooyinka AAPC fasal dhaqameed u dhow xaafaddooda.
Ardayda qaata koorsooyinka AAPC ee ka gudba imtixaanada shahaadiga ah waxay heli karaan shahaadooyin iyo shaqooyin aamin ah iyagoo adeegsanaya shahaadada. Waxay dooran karaan inay ku bartaan shahaadada sare ee goobta iyagoo raacaya n associate ama shahaadada bachelorka iyada oo loo marayo barnaamij la aqoonsan yahay.
Iskuulada Bixinta Caafimaadka ee Aqoonsiga iyo Koodhadhka Codbixinta ee khadka tooska ah ee Caawinta Dhaqaalaha
Ardayda doonaya inay helaan waxbarasho iyo tababar ku saabsan biilasha iyo koodh-bixinta caafimaad ma booqan karaan oo keliya xerada laakiin sidoo kale waxay ku baran karaan waxbarashada khadka tooska ah. Dugsiyadan khadka tooska ah waa la aqoonsan yahay qaarkoodna waxay siiyaan kaalmo dhaqaale ardayda aan haysan maalgelin.
Sidaa darteed, biilasha caafimaadka ee la aqoonsan yahay iyo iskuulada khadka tooska ah ee koodh siiya kaalmo dhaqaale ardaydooda waxaa ka mid ah:
Kuleejka Cambridge ee Daryeelka Caafimaadka iyo Teknolojiyada
Akadeemiyada Caafimaadka Ultimate
Kuleejka Cambridge ee Daryeelka Caafimaadka & Teknolojiyada waa xarun gaar loo leeyahay oo ka dambeysa dugsiga sare oo ku taal Delray Beach, Florida.
Machadku wuxuu ardayda u diyaariyaa xirfad guul leh daryeelka caafimaadka iyo macluumaadka tiknoolajiyadda warshadaha iyaga oo siiya barnaamijyo biil ah oo caafimaad iyo barnaamijyo koodh lagu qoro. Intaa waxaa sii dheer, iskuulku wuxuu bixiyaa labaatan (20) shahaado oo koodhadh khaas ah oo loogu talagalay koodhadhka khibrada leh.
Kulliyadda Cambridge ee Daryeelka Caafimaadka iyo Teknolojiyada waxay u taagan tahay mid ka mid ah iskuulada deeqaha waxbarasho siiya ardaydooda. Tirakoobka ayaa muujinaya taas ku saabsan boqolkiiba 70 ardayda dhigata machadku waxay helaan kaalmo dhaqaale.
Jaamacadda DeVry waa jaamacad gaar loo leeyahay oo macaash doon ah oo lagu aasaasay 1931.
Jaamacaddu waxay ku bixisaa biil caafimaad iyo barnaamijyo koodhadhka khadka tooska ah. Halkan, ardaydu waxay ku bartaan waayo-aragnimo gacan-ku-qaadis ah shaybaarrada farsamada iyadoo la adeegsanayo diiwaannada caafimaadka ee nolosha dhabta ah.
Heerka koowaad ee jaamacadeed, jaamacaddu waxay siisaa ardayda AHIMA imtixaanka shahaadada CCS. Shahaadadan, qalin-jabiyayaashu waxay horay ugu sii wadi karaan inay ku sii wadaan jaamacad ama barnaamij shahaadada jaamacadeed ah.
Dhinaca kale, DeVry waxay siisaa deeq waxbarasho ardayda raacaysa biilka caafimaadka iyo barnaamijyada sireed. Qiyaastii boqolkiiba 91 ardayda waxay ka helaan kaalmo lacageed Jaamacadda DeVry.
Jaamacadda Herzing waa jaamacad gaar loo leeyahay oo xarunteedu tahay Milwaukee Wisconsin waxayna leedahay dhowr xarumood oo ku yaal Mareykanka oo dhan.
Jaamacadu waxay bixisaa biil caafimaad oo caafimaad iyo barnaamijyo sireed. Jaamacadda Herzing waxay ku bixisaa barnaamijka laba waddo (barnaamijka diblooma iyo barnaamijka shahaadada jaamacadeed). Barnaamijka diblooma waxaa lagu dhammaystiri karaa laba iyo toban (12) bilood gudahood waxayna ardayda u diyaarineysaa inay isla markiiba galaan shaqaalaha. Ardaydu waxay geli karaan barnaamijka shuraakada ama shahaadada koowaad ee bachelorka si ay u helaan waxbarasho dhammaystiran oo ku saabsan berrinka.
Tirakoobka ayaa muujinaya taas ku saabsan boqolkiiba 97 ardayda dhigata machadku waxay helaan kaalmo dhaqaale.
Koodhadhka Caafimaadka ee Qiime jaban iyo Barnaamijyada Lacag Bixinta ee khadka tooska ah
Haddii aadan awoodin inaad gasho mid ka mid ah biilasha caafimaadka iyo koodhadhka koodhadhka ee shabakadaha bixiya kaalmooyinka maaliyadeed, waxaad dooran kartaa iskuulada bixiya biilka caafimaadka iyo barnaamijyada koodhinta ee qiime jaban.
Koorasyada biil-bixinta caafimaadka iyo koodhadhka koodhadhka kharashaadkoodu wuu ka hooseeya dugsiyadan. Hoos waxaa ku yaal iskuulada bixiya biil caafimaad oo qiimo jaban iyo barnaamijyo koodhadh sireed:
Kuliyadda Farsamada ee Oconee Fall Line
College Texas College
Ogeechee Kuliyada Farsamada
Kulliyadda Farsamada Oconee Fall Line (OFTC) waa kuleejka bulshada ee bulshada oo la aasaasay 2010. Xarumaheeda ugu waawayn waa Sandersville iyo Dublin, Georgia.
OFTC waxay bixisaa barnaamijka shahaadada karraaniga biilasha caafimaadka ee khadka tooska ah. Barnaamijkani wuxuu u baahan yahay dhibcaha 20 simistar si loo dhammaystiro in ka badan laba semestar. Koorasyada biilka ee caafimaadka iyo koodhlaynta khadka tooska ah ee internetka ayaa kharash ka yar ka bixinaya OFTC.
Waxbarashada: $ 2,662
Kulliyadda Dhexe ee Texas (CTC) waa kulleej jaaliyadeed oo ku yaal Killeen, Texas oo la aasaasay 1965. Waxay leedahay xarumo faracyo ah oo kuyaala qaarada Yurub iyo xarumaha militariga oo dhan Mareykanka
Kuleejku wuxuu bixiyaa in ka badan 30 darajo gudaha-iyo in ka badan barnaamijyada shahaadada 45 ayaa khadka tooska ah ku jira. Barnaamijyada khadka tooska ah waxaa ka mid ah biilasha caafimaadka iyo barnaamijka takhasuska koodhka. Barnaamijkani wuxuu u baahan yahay 340 saacadood oo koorso ah si loo dhammeeyo in ka badan laba xilli-dugsiyeed muddo ka yar hal sano. Koorsooyinka biil-bixinta caafimaadka iyo koodhadhka koodhadhka ee khadka tooska ah ayaa ka kharash yar CTC.
Waxbarashada: $ 3,090
Kuleejka Farsamada ee Ogeechee (OTC) waa kulliyad farsamo oo dadweyne oo ku taal Statesboro, Georgia oo la aasaasay 1986.
OTC waxay bixisaa in ka badan 100 heer sare ah labadaba xerada iyo khadka tooska ah. Barnaamijka shahaadada koodhka caafimaadka ayaa ka mid ah kuwa waaweyn ee internetka ee OTC ay bixiso. Barnaamijkani wuxuu ardayda u diyaarinayaa imtixaannada shahaadiga ah waxayna u baahan tahay ugu yaraan 24 saacadood oo simistar ah si loo dhammaystiro in ka badan laba semestar.
Waxbarashada: $ 2,770
Koorsooyin Lacageed Caafimaad Oo Bilaash Ah Iyo Koorsooyinka Koodh Bixinta
Koorsooyinka biil caafimaad ee bilaashka ah iyo koodh gareynta cod bixinta ee hoos ku xusan waxaa loogu talagalay ardayda aan haysan lacag ay isku qoraan koorso biil iyo codayn caafimaad iyo ardayda aan iska qori karin mid ka mid ah iskuulada oo bixiya biil caafimaad iyo barnaamijyo codeynta oo leh kaalmooyin dhaqaale.
Marka lagu guuleysto dhameystirka, shahaadooyinka ayaa la siiyaa koorsooyinka qaar halka aysan jirin wax shahaadooyin ah kuwa kale.
Sidaa darteed, koorsooyinka biilinta caafimaad ee bilaashka ah iyo koorsooyinka sireedku waxaa ka mid ah:
Waa maxay Koodh Caafimaad iyo Biilasha?
Amniga internetka ee daryeelka caafimaadka
Baro Biilka Caafimaadka Hal Saac
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa waajibaadka codeeye caafimaad iyo biil caafimaad, koodh lagu ogaanayo, habaynta nidaamka, xulashooyinka waxbarasho ee aad haysato, iyo sida loo helo khibrad shaqo.
Koorsadan waxaa loogu talagalay ardayda aan hubin inay galayaan qaybta biilinta caafimaadka iyo codeynta laakiin doonaya shaqooyin fog. Waxaa bixiya PPMC Academy iyada oo loo marayo Udemy waxayna qaadataa saacad in la dhammaystiro iyada oo aan la siinin wax shahaado ah.
Nabadgelyada Amniga ee Daryeelka Caafimaadka waxaa bixiya Jaamacadda Erasmus University Rotterdam iyada oo loo marayo Coursera oo bilaash ah.
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa dhinacyada bulshada iyo teknolojiyada ee amniga internetka ee loo adeegsado ilaalinta isbitaalada ammaan. Waxaad sidoo kale baran doontaa caqabadaha ku saabsan digitation-ka waaxda daryeelka caafimaadka.
Koorsadani waxay ka kooban tahay modules oo ay ka mid yihiin jabsiga, nadaafadda internetka, jebinta xogta, iyo dhaqanka aadanaha. Waxay kugu qaadan doontaa 15 saacadood inaad ku dhammaystirto, ka dib, waxaa lagu siin doonaa caddeyn.
Si kastaba ha noqotee, koorsadani si toos ah uma barin koodh daryeel caafimaad iyo biil. Waxa ugu fiican ayaa ah inay ku siin karto aqoontii hore ee IT-ga ee looga baahnaa inaad ku guuleysato berrinka.
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah haddii ay bixiyaan YouTube iyo Dr. Chrono.
Baro Lacag Bixinta Caafimaadka ee Hal Saacad waxay cashar ka dhigaysaa cashar fiidiyow ah oo ku bari doona sida loo isticmaalo codsiyada maareynta dakhliga Apollo iyo Apollo + si loo sameeyo hababka biilku u fiicnaadaan. Markaad iska diiwaangeliso koorsadan, waxaad fursad u heli doontaa inaad gasho biilasha caafimaadka ee Dr. Chrono iyo diiwaanka caafimaadka si aad u hesho khibrad dheeraad ah.
Koorsadan fiidiyowga ah waxay qaadataa hal saac in la dhammaystiro shahaadadana lama siinayo ka dib dhammaystirka koorsada.
Kharashka Caafimaadka ee ugu sareeya iyo Koodhadhka Koorsooyinka Khadka Tooska ah
Xaaladdan dhexdeeda, waxaad ku baran doontaa biilasha caafimaad ee ugu sarreeya iyo koorsooyinka internetka ee koodh bixinta iyo kharashkooda. Koorsooyinkan waxaa bixiya hay'ado sumcad ku leh internetka.
Sidaa darteed, biilasha caafimaad ee ugu sareeya iyo barnaamijyada khadka toosan lagu bixiyo waxaa bixiya:
Kuleejka Farsamada ee Northwest
Kuliyada Bulshada iyo Farsamada ee Gobolka Minnesota
Kulliyadda Bulshada ee Degmada Laramie
Jaamacadda Keizer-Ft Lauderdale
Kuliyada Farsamada Bulshada Guilford
Khatarta Bulshada Iyo Kuliyada Farsamada
Northland Community College iyo College Technical
Aagga Kulliyadda Bulshada ee Metropolitan
Southwest Wisconsin Farsamo
Kuleejka Rochester Community iyo Farsamada Farsamada
Kuliyada Bulshada ee Highland
Kuliyada Bulshada ee Hills Hills
Kulliyadda Dhexe ee Texas (CTC) waa kuleejka bulshada ee Killeen, Texas oo la aasaasay 1965. Waxay leedahay xarumo faracyo ah oo kuyaala qaarada Yurub iyo xarumaha militariga oo dhan Mareykanka oo dhan.
CTC waxay bixisaa barnaamijka AAS ee khadka tooska ah ee biilasha iyo koodh bixinta. Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay koorsooyin ereybixin caafimaad, anatomy iyo physiology, iyo pathophysiology. Koorsooyinkan waxay ardayda siinayaan aqoon ku saabsan caafimaadka. Intaas waxaa sii dheer, barnaamijku wuxuu sahmiyaa hababka koodhinta iyo kala soocidda, caymiska, iyo softiweerro u gaar ah warshadaha. Ardaydu waxay sidoo kale qaataan casharro ku saabsan Ingiriisiga, cilmiga aadanaha ama farshaxanka wanaagsan, iyo sayniska bulshada.
Biilka caafimaadka iyo koorsooyinka khadka tooska ah ee koodhku waa qiime $ 3,090 ee CTC.
Central Texas College waxay aqoonsi ka haysataa Ururka Koonfurta ee Kulliyadaha iyo Guddiga Dugsiyada ee Kulliyadaha.
Kuleejka Farsamada ee Northwest (NTC) waa kulleej farsamo dadweyne oo ku yaal Bemidji, Minnesota, Mareykanka oo la aasaasay 1965.
Hay'addu waxay bixisaa barnaamij codsi caafimaad oo 60-qof ah shaqsi ahaan iyo gebi ahaanba khadka tooska ah. Barnaamijkani wuxuu ardayda u diyaarinayaa inay xirfad ku yeeshaan codeynta caafimaadka kana shaqeeyaan goobo caafimaad oo kala duwan.
Wadashaqeynta NTC iyo Mayville State University waxay u oggolaanaysaa ardayda ka qalin jabisay inay u wareejiyaan dhammaan 60 ka mid ah dhibcaha AAS ee ku saabsan shahaadada internetka ee Farshaxanka ama Bachelor of Science (BAS) ee maamulka ganacsiga.
Biilka caafimaadka iyo koorsooyinka khadka tooska ah ee koodhku waa qiime $ 5,654 ee NTC.
Kulliyadda Farsamada ee Northwest waxaa aqoonsan Guddiga Sare ee Waxbarashada.
Kulliyadda Bulshada iyo Farsamada ee Gobolka Minnesota (M Gobolka) waa kuliyad bulsho iyo mid farsamo oo la aasaasay 2003. Waxay leedahay xarumo badan oo ku yaal Minnesota.
Hay'addu waxay bixisaa barnaamijka shahaadada AAS ee khadka tooska ah ee 64-ah ee Teknolojiyada Macluumaadka Caafimaadka / Coding. Si kastaba ha noqotee, ardayda waxaa looga baahan doonaa inay ku qaataan layliyo shaqsiyeed inta lagu jiro barnaamijka.
Inta ay wax ku baranayaan khadka tooska ah, ardayda waxay heli karaan maktabad elektaroonig ah, la-talin, la-talin, iyo umeerin. Tani waxay ka caawineysaa iyaga inay helaan khibrad gacmeed oo ku saabsan nidaamyada codeynta caafimaadka.
Iyadoo loo marayo iskaashiga M State ee dhowr jaamacadood, ardayda ka qalin jabisa AAS waxay u wareegi karaan barnaamijka bachelorka ee maareynta macluumaadka caafimaadka ama maamulka adeegyada caafimaadka.
Biilka caafimaadka iyo koorsooyinka khadka tooska ah ee koodhku waa qiime $ 5,560 ee Gobolka M.
Kulliyadda Farsamada iyo Farsamada ee Gobolka Minnesota waxay haysataa aqoonsi ka timid Guddiga Waxbarashada Sare. Barnaamijka HIT-ka ee hay'adda waxaa aqoonsan Guddiga Aqoonsiga Aqoonta Caafimaadka iyo Waxbarashada Maareynta Macluumaadka.
Kulliyadda Bulshada ee Degmada Laramie waa kuleejka bulshada ee degmada Laramie, Wyoming oo la aasaasay 1968.
LCCC waxay bixisaa barnaamij toos ah oo toos ah oo ah 63-credit barnaamijka AAS ee tikniyoolajiyada macluumaadka caafimaadka iyo maaraynta macluumaadka. Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay saddex shahaado oo casri ah.
Markay ardaydu dhaafaan semesterka koowaad, waxay diblooma kaheli doonaan waxyaabaha muhiimka u ah xafiiska caafimaadka shahaadadan ayaa uqalmaysa inay ka shaqeeyaan xafiis caafimaad inta ay dhammaystirayaan barnaamijka HIT. Dhameystirka labada semestar ee soosocda waxay ardayda uqalmayaan shahaado siinta codeynta sheegashooyinka caafimaadka. Ardayda waxaa la siin doonaa shahaadada AAS markay ku dhameystaan ​​barnaamijka labo sano gudahood.
Machadku wuxuu aqoonsi ka haystaa Guddiga Waxbarashada Sare ee Waqooyiga Bartamaha Ururka Kulliyadaha iyo Iskuulada.
Jaamacadda Keizer waa jaamacad gaar loo leeyahay oo ku taal West Palm Beach, Florida oo la aasaasay 1977. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taal Fort Lauderdale, Florida.
Keizer wuxuu ardayda siiyaa shahaadada AS ee qaan-sheegashada maamulka caafimaadka iyo codeynta khadka tooska ah iyo shakhsi ahaan xarumaha jaamacadda ee Florida. Barnaamijkan waxaa lagu maamulaa labadaba English iyo luqadaha Isbaanishka.
Ardaydu waxay qaataan muxaadarooyin iyo ficillo ka caawiya iyaga inay helaan aqoonta iyo xirfadaha looga baahan yahay biilasha caafimaadka iyo codeynta iyo sidoo kale maamulka daryeelka caafimaadka.
Kulliyadda Bulshada ee Guilford (GTCC) waa kuleejka bulshada ee Piedmont Triad ee Waqooyiga Carolina oo la aasaasay 1958.
GTCC waxay bixisaa barnaamijka AAS ee maamulka xafiiska caafimaadka labadaba khadka tooska ah iyo xerada dhexdeeda. Ardayda waxaa la siiyaa tababar qoto dheer oo ku saabsan nidaamyada habka codeynta ee u gaarka ah warshadaha iyo maamulka xafiiska.
Guilford Technical Community College waxaa aqoonsan Ururka Koonfurta ee Kulliyadaha iyo Guddiga Dugsiyada ee Kulliyadaha.
Khatarta Bulshada iyo Kuliyada Farsamada (HCTC) waa kulleejada bulshada ee Hazard, Kentucky oo la aasaasay 1968.
HCTC waxay ku bixisaa barnaamijka AAS teknolojiyada macluumaadka caafimaadka ee qadka iyo xerada. Ardaydu waxay dooran karaan inay ku takhasusaan codeynta caafimaadka ee barnaamijkan. Waxay kasbadaan xirfadaha iyo aqoonta looga baahan yahay inay ku galaan goobta daryeelka caafimaadka xirfadlayaal taageero caafimaad oo la aqoonsan yahay. Waxay qaadataa laba sano in la dhammaystiro barnaamijkan.
Northland Community & Technical College waa beel dadweyne iyo kuuliyada farsamada ee Minnesota, Mareykanka.
Kulliyaddan laba-sano ah waxay bixisaa barnaamijka 60-credit oo ah koodhadhka caafimaadka ee barnaamijka AAS. Barnaamijku wuxuu ardayda u diyaariyaa imtixaannada shahaado siinta qaranka. Intaa waxaa sii dheer, ardaydu waxay helayaan aqoon shaqo oo ah maaraynta macluumaadka caafimaadka.
Northland Community & Technical College waxaa aqoonsan Guddiga Sare ee Waxbarashada.
Kulliyadda Bulshada ee Metropolitan (Metro or MCC) waa kuleejka bulshada ee Omaha, Nebraska oo la aasaasay 1971.
Metro waxay ku bixisaa barnaamijyada AAS barnaamijka maaraynta macluumaadka caafimaadka 100.5-credit khadka tooska ah. Ardayda dhigata MCC waxay qaataan koorsooyinka maamulka daryeelka caafimaadka waxayna qaataan tababar shaqsiyeed. Waxay sidoo kale qaataan ikhtiyaarka biilka iyo koodh-bixinta ee barnaamijka waxayna xoogga saaraan caymiska, dawooyinka, iyo geedi socodka cudurrada.
Kulliyadda Farsamada ee Koonfur-galbeed Wisconsin (Koonfur Galbeed Tech) waa kulleej farsamo oo ku taal Fennimore, Wisconsin oo la aasaasay 1967.
Machadku wuxuu ardayda siiyaa barnaamij shahaadada jaamicadeed ah ee teknolojiyadda macluumaadka caafimaadka qadka tooska ah marka laga reebo waxqabadka xirfadeed.
Barnaamijkani wuxuu marayaa illaa shan semestar wuxuuna ardayda u diyaarinayaa shaqo heer-gal ah oo laga helo shaqooyin badan oo xagga maamulka caafimaadka ah oo ay ku jiraan biilasha iyo koodh gareynta. Ardaydu waxay qaadan doonaan koorsooyin ay ka mid yihiin codaynta, tirakoobka, akhris-qoraalka dhijitaalka ah, iyo daraasadaha kaladuwan.
Rochester Community iyo Farsamada Kuliyada
Rochester Community iyo Kuliyada Farsamada (RCTC) waa kuleejka bulshada ee Rochester, Minnesota oo la aasaasay 1915.
Kuleejku wuxuu bixiyaa barnaamijka AAS barnaamijka tiknoolajiyada macluumaadka caafimaadka ee 64-credit. Barnaamijkan, ardayda waxaa lagu qaataa koorsooyin caafimaad iyo maamul iyo koorsooyinkan waxay u diyaarinayaan inay galaan Imtixaanka qaran ee Maamulka Maaraynta Macluumaadka Caafimaadka Mareykanka. Marka ay ku aflaxaan imtixaanka, waxay kasbadaan aqoonsiga farsamo yaqaan diiwaangashan macluumaadka caafimaadka.
Qalinjabiyeyaasha barnaamijka AAS waxay u wareejin karaan dhammaan dhibcaha kulliyadaha afarta sano ah. Barnaamijka AAS ee teknolojiyadda macluumaadka caafimaadka waxaa aqoonsan Guddiga Aqoonsiga Caafimaadka Xogta iyo Waxbarashada Maareynta Macluumaadka.
Highland Community College waa kuleejka bulshada ee Highland, Kansas oo la aasaasay 1858.
HCC waxay bixisaa 65-credit barnaamijka AAS ee koodhadhka caafimaadka ee khadka tooska ah.
Ardaydu waxay ku dhammaysan karaan shahaadada sumcadda caafimaadka ee HCC 65-koodh lambar laba sano ah oo isqoritaan buuxa ah. Koorsooyinka tababarka xirfadeed ee aasaasiga ah waxay u diyaariyaan ardayda qalin jabisa inay galaan Imtixaannada Koodhka Certified iyo Shahaadada Takhasuska Koodhka Certified.
Shuruudaha qaybinta ee wada xiriirka, cilmiga bulshada, iyo sayniska bulshada waxay dhisaan xirfado jilicsan oo la xiriira shaqada maamulka caafimaadka. Barteyaashu waxay wax ku bartaan gebi ahaanba khadka tooska ah, marka laga reebo koorsada dhagxaanta. Layli ahaan, ardaydu waxay kaqaybqaataan tababar caafimaad xarun codsi oo la ansixiyay.
Kulliyadda Bulshada Sare waxaa aqoonsan Guddiga Sare ee Waxbarashada.
Kuliyada Bulshada ee Indian Hills (IHCC) waa kuleejka bulshada ee Iowa oo la aasaasay 1966.
IHCC waxay si buuxda barnaamijka ugu fidisaa barnaamijka AAS ee teknolojiyadda macluumaadka caafimaadka (HIT). Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay manhajka oo ay ka mid yihiin biilasha caafimaadka iyo codeynta, softiweerka maareynta daryeelka caafimaadka, qoraalka, iwm. Waxay qaadataa qiyaastii kow iyo labaatan (21) bilood si loo dhammaystiro barnaamijka.
Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa ardayda inay qaataan labo shaashad taas oo siinaysa fursad ay ku kasbadaan shahaadada AA ee loo wareejin karo jaamacadaha.
Koorsooyinka Caafimaadka Maskaxda ee Online-ka ah oo Bilaash ah oo Bilaash ah
Koorsooyinka tooska ah ee 13 ee Bilaashka ah ee Cilmu-nafsiga Carruurta
3 Goobood Si Aad Uga Hesho Shahaadooyin Iskuxira Khadka Tooska ah
Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Kuliyada Hillsdale
Previous Post:13 Barnaamijyada Master-ka ee ugu Fiican Kanada Shaqooyinka
Post Next:15 Iskuulada injineerinka Korantada Korantada ugu Fiican adduunka
Pingback: 13ka Dugsi Caafimaad Ee Ugu Sarreeya Oo Lacag La'aan Ah 2021